विज्ञापन खरीद नगरी अधिकतम जैविक बृद्धिका लागि युट्यूबको उत्तम अभ्यासहरू प्रयोग गर्दै तपाईंको च्यानल र भिडियोहरू अनुकूलन गर्नुहोस्! हामी YouTube च्यानल ग्रोथका लागि गुगल प्रमाणित हौं र जान्न के ले यसलाई प्रदर्शन लिन लिन्छ!
हामीलाई थाहा छ YouTube मा कसरी गर्ने।
हाम्रो YouTube प्रमाणित विज्ञहरू २०११ देखि यूट्यूब एसईओ गरिरहेका छन्। हामी उत्तम र सबै भन्दा प्रभावकारी रणनीतिहरू जान्दछौं जसले परिणाम दिन्छन्। हामी तपाईंको च्यानल र भिडियोहरूको पूर्ण मूल्याate्कन गर्नेछौं, त्यसपछि तपाईंलाई विशेष, विस्तृत र सजिलै अनुसरण गर्न निर्देशनहरू प्रदान गर्नुहोस् यसलाई अनुकूलन गर्न र खोजी परिणामहरूमा उच्च श्रेणीकरण गर्न। यो दर्शकहरु को लागी यातायात गर्न को लागी मिल्छ - जैविकहरु।
YouTube च्यानल समीक्षा FAQ
के तपाइँ गैर-अ YouTube्ग्रेजी यूट्यूब च्यानलमा एक च्यानल मूल्यांकन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ यी सेवाहरू गैर-अ English्ग्रेजी यूट्यूब च्यानलहरूमा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
कहिले सम्म तपाईं मेरो च्यानल मूल्यांकन आफैलाई रेकर्ड गर्नुहुन्छ?
तपाईंले हामीबाट प्राप्त गरेको भिडियो 45+ मिनेट लामो र तपाईंको YouTube च्यानलमा बहुमूल्य अन्तरदृष्टिले भरिपूर्ण हुनेछ।
YouTube भिडियो SEO FAQ
कसरी वर्धित शीर्षक, वर्णन र कीवर्डहरू / ह्याशटैगले मेरो च्यानल बढाउन मद्दत गर्दछ?
हामी तपाईंलाई एक शीर्षक, वर्णन र कुञ्जी शव्द / ह्याश ट्याग दिनको लागि उत्तम अभ्यासहरू र प्रीमियम अनुसन्धान उपकरणहरूको संयोजन प्रयोग गर्दछौं जसले तपाईंलाई राम्रो दर्जा दिन, अधिक पेशेवर देखाउन र तपाईंको भिडियोको क्लिक-थ्रू-दर (CTR) बढाउन मद्दत गर्दछ।
के तपाईंलाई मेरो YouTube च्यानल लग इन प्रमाणहरू आवश्यक छ?
होइन, हामीलाई तपाईंको लग इन प्रमाणहरू आवश्यक छैन। हामी तपाईंको YouTube च्यानलमा लग इन गर्दैनौं। यसको सट्टामा, हामी तपाईंलाई विस्तृत र सजिलै बुझ्नको लागि कागजात प्रदान गर्दछौं ताकि तपाईं आफैं अनुकूलन सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ। यो सजिलो छ र तपाइँ आफैले परिवर्तनहरू आफैंलाई लागू गर्न चाहानुहुन्छ, किनकि यसले तपाईंलाई YouTuber को रूपमा सिक्न र बढ्न मद्दत गर्दछ।
हो र होईन, हामी वर्णन गरौं ... हाम्रो मातृभाषा अ is्ग्रेजी हो। हामी तपाईलाई सम्भव अत्यन्त उत्तम गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न चाहान्छौं, हामी दुर्भाग्यवस तपाईलाई अर्को भाषामा हाम्रो SEO समीक्षा प्रदान गर्न सक्दैनौं।
जहाँसम्म ... हामी तपाईंलाई अंग्रेजीमा तपाईंको सेवा पुर्‍याउन सक्दछौं, तब तपाईं यसलाई गुगल भाषामा परिवर्तन गर्न गुगल अनुवाद प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। गुगल ट्रान्सलेशनले अनुवादको उत्कृष्ट काम गर्छ, त्यसैले तपाईले यी सेवाहरूबाट ठूलो लाभ लिन सक्नुहुनेछ, यदि तपाईंको च्यानल अर्को भाषामा भए पनि।
पूर्ण प्रक्रियाले कति समय लिन सक्दछ?
यो तपाईंको लक्ष्यहरूमा आधारित हुन सक्छ। सामान्यतया, हाम्रो सुझावहरू कार्यान्वयन गरेपछि, तपाईं पहिलो महिनाको अवधिमा ढिलो वृद्धि देख्नुहुनेछ किनभने YouTube ले तुरून्त परिणामहरू अपडेट गर्दैन। त्यसो भए, चलिरहेको महिनाहरूको लागि, गति छिटो लिनेछ र महिना-पछि-महिनामा टिप्न जारी राख्नेछ। यो एक ट्रान्सपोर्ट ट्रक जस्तै छ ... परिणामहरू ढिलो सुरु हुनेछ, तर एक पटक गति बढ्यो भने, तपाईं अगाडि बढ्दो गति क्रूज गर्नुभयो! यी नतीजाहरू मान्दैछन कि तपाईंले हाम्रो सल्लाहहरू लागू गर्नुभयो र तपाईं पनि गुणवत्ता सामग्री पोष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सामग्रीको गुणवत्ता जस्तोसुकै भए पनि, हाम्रो सेवाहरूले सहयोग पुर्‍याउँछन्, तर उच्च गुणस्तरको सामग्री, हाम्रा सुझावहरू कार्यान्वयन गरिसकेपछि तपाईं अझ राम्रा नतिजाहरू देख्नुहुनेछ।
YouTube ग्राफिक डिजाइन FAQ
कसरी उन्नत च्यानल ब्यानर र भिडियो थम्बनेलहरूले मेरो च्यानल बढाउन मद्दत गर्दछ?
पहिलो प्रभावहरू अनलाइन संसारमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यदि कसैले तपाइँको च्यानल भ्रमण गर्दछ र ब्यानर र भिडियो थम्बनेलहरू देख्दैनन् जसले उनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछ भने, तिनीहरू छिटो पछाडि बटन थिच्नेछ। हाम्रो पेशेवर डिजाइन सेवा तपाईंको अनुहारमा एक मुस्कान राख्नेछ जब तपाईं ग्राफिक्स अपलोड गर्नुहुन्छ र तपाईंको उन्नत, पेशेवर "स्टोरफ्रन्ट" देख्नुहुनेछ।
व्यावसायिक भिडियो थम्बनेल डिजाइन गर्न यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
यदि तपाईंले एक हेराइ लिनुभयो भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि सबै प्रमुख YouTubers कस्टम भिडियो थम्बनेलहरू प्रयोग गर्दै छन् उनीहरूको भिडियोहरू पप बनाउन र अधिक क्लिकहरू प्राप्त गर्न। गुणस्तर, कस्टम थम्बनेलले तपाइँको भिडियोलाई भिडियो भन्दा भिन्न बनाउँदछ कि अधिक हेराई हुन सक्छ वा तपाइँ भन्दा बढी लोकप्रिय हुन सक्छ। यदि तपाइँको भिडियो खोज परिणामहरूमा कम र lower्कन गरिएको छ भने पनि, अनुकूलन थम्बनेलले उनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्नेछ र त्यसकारण तिनीहरूलाई तपाइँको भिडियो भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
अनुकूलन थम्बनेलहरूले तपाइँको यूट्यूब र गुगल खोज रैंकिंगलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, यसैले तपाईका लागि अधिक जैविक ट्राफिक सिर्जना गर्दछ।
होइन, हामीलाई तपाईंको लग इन प्रमाणहरू आवश्यक छैन। हामी तपाईंको YouTube च्यानलमा लग इन गर्दैनौं। यसको सट्टामा, हामी तपाईंलाई ग्राफिक्स प्रदान गर्दछौं ताकि तपाईं तिनीहरूलाई आफैं अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो सजिलो छ र तपाईं आफैं परिवर्तनहरू गर्न चाहनुहुन्छ, किनकि यसले तपाईंलाई YouTuber को रूपमा सिक्न र बढ्न मद्दत गर्दछ।
हो! हामी प्रत्येक युट्युब च्यानल प्रकारका लागि ग्राफिक्स डिजाइन गर्न सक्दछौं, तपाईंको सामग्री को के आला भन्ने कुरामा फरक पर्दैन।
के हुन्छ यदि मलाई डिजाईन मनपर्दैन, वा परिवर्तनहरू चाहान्छु?
केवल हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् के तपाईं परिवर्तन भएको हेर्न चाहनुहुन्छ र हामी संशोधनहरू गर्नेछौं! अन्तमा, हामी तपाइँले आफ्नो युट्यूब च्यानलमा प्राप्त गरेको ग्राफिक्स र तपाइँको पोस्ट मनपराउन चाहन्छौं।
यो तपाईंको लक्ष्यहरूमा आधारित हुन सक्दछ। सामान्यतया, हाम्रो ग्राफिक्स कार्यान्वयन पछि, तपाईं पहिलो महिनाको समयमा ढिलो विकास देख्नुहुनेछ किनभने YouTube ले परिणाम तुरून्त अपडेट गर्दैन। त्यसो भए, चलिरहेको महिनाहरूको लागि, गति छिटो लिनेछ र महिना-पछि-महिनामा टिप्न जारी राख्नेछ। यो एक ट्रान्सपोर्ट ट्रक जस्तै छ ... परिणामहरू ढिलो सुरु हुनेछ, तर एक पटक गति बढ्यो भने, तपाईं अगाडि बढ्दो गति क्रूज गर्नुभयो! यी नतीजाहरू मान्दैछन कि तपाईंले हाम्रो ग्राफिक्स लागू गर्नुभयो र तपाईं पनि गुणवत्ता सामग्री पोष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सामग्रीको गुणवत्ता जस्तोसुकै भए पनि, हाम्रा सेवाहरूले मद्दत गर्दछन्, तर उच्च गुणस्तरको सामग्री, राम्रो परिणामहरू जुन तपाईं हाम्रो ग्राफिक्स कार्यान्वयन पछि देख्नुहुनेछ।